Farmaajo oo qaba in dib u heshiisiin lala furo Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Farmaajo oo qaba in dib u heshiisiin lala furo Alshabaab
Mareeg.com: Ra’iisul Wasaarihii hore Dowladdii KMG aheyd ee Soomaaliya, Maxmed C/laahi Maxamed ”Farmaajo” ayaa qaba in looga faa’iideysto dilkii hogaamiyihii Alshabaab in wada hadal lala furo ururkaas.
Maxmed C/laahi Farmaajo ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay dib u sheshiisiin ay la gasho Al-shabaab, gaar ahaan kuwa nabada ogol islamarkaana looga faa’ideysto Dhimashada Axmed Godane, sida uu yiri.
Farmaajo ayaa tilmaamay in mudada 45-ta cesho ah ee dowladda Soomaaliya u qabatay in Alshabaab isku soo dhibaan aysan aheyn mid ku filan, oo loo baahan yahay in loogu baaqo nabad iyo dib u heshiisiin.
“45-tii cisho ee dowladda Soomaaliya ay u qabatay Al-shabaab in ay isku soo dhiibaan kuma filna, waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin furan oo Al-shabaab lala galo si loo ciribtiro”ayuu yiri Farmaajo.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa sheegay in dhalinyarada u dagaalanta Al-shabaab ay yihiin Dhalinyaro Soomaaliyeed islamarkaana lagu dadaalo sidii looga soo reebi lahaa ururkaas iyo afkaarihiisa.
Rag lagu tuhmay iney ka tirsan yihiin Alshabaab oo lagu qabtay Jarmalka